Leicester Oo Ku Tumatay Manchester United, Ole Oo Guul-darro Kale Soo Hooyey Iyo Natiijooyinka Kulamadii Kale Ee Premier League - GOOL24.NET
Leicester Oo Ku Tumatay Manchester United, Ole Oo Guul-darro Kale Soo Hooyey Iyo Natiijooyinka Kulamadii Kale Ee Premier League
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul-darradii labaad oo xidhiidh ah kasoo hoysay horyaalka Premier League, waxaana kulan musalsal ahaa ku garaacday Leicester City oo ay ku kala baxeen 4-2.
Nemanja Matic ayaa faraha caseeyey Kasper Schmeichel kaddib kubbad awood badan oo uu bannaanka kaga toogtay.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa isbeddel ku sameeyey kooxdiisa qaybta dambe, waxaanu saaray Jadon Sancho oo uu ku beddelay Marcus Rashford oo ay u ahayd ciyaartiisii koowaad ee xilli ciyaareedkan kaddib qalliin lagaga sameeyey garabka.
Nemanja ayaa badbaadiyey kubbad halis ahayd oo goolka ku socotay oo uu kusoo toogtay Tielemans daqiiqaddii xigtayna waxa fursad dahabi ah la lumiyey Manchester United xiddiga reer Portugal ee Cirstiano Ronaldo.
Dhinaca kale, Manchester City ayaa 2-0 ku garaacday Burnley oo marti u ahayd, waxaanay yeelatay 17 dhibcood oo ay ku fadhiyaan kaalinta labaad, waxaanay hal dhibic ka sarreeyaan Chelsea oo ay ciyaarteedu mar dhow bilaabmi doonto.
Natiijooyinka kulamadii Premier League ee maanta oo dhamaystiran: